Ndị ahịa bara ọgaranya chọrọ Nlekọta Ndị Nlekọta Ndị Ahịa | Martech Zone
Usoro igodo mgbasa ozi nke ndi mmadu aghaghi itinye oru ndi ahia. Ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche na nke abụọ, mana ndị ahịa gị enweghị nkewa dị otu ahụ. Ozugbo ị na-elekọta mmadụ, ha ga-eji ọwa a maka ajụjụ, nkọwa na mkpesa. Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike igosipụta ọrụ aka ndị ahịa gị n'ihu ọha, si otú ahụ marketing otú ọma ị na-eme ya na atụmanya.
Ihe ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghị amata bụ na ọ bụ ndị ahịa gị nwere nnukwu ego na ya ahọrọ nlekọta mmekọrịta na ọrụ ndị ahịa. Kwe ka nke ahụ mikpuo…
Ndị na-akwụ ụgwọ dị elu na-eji nnukwu netwọkụ mmekọrịta maka ọrụ ndị ahịa. Ndị ụlọ ọrụ na-anaghị eji nke ahụ na-efu ohere iji melite ahụmịhe ọhụụ ma too. McKinsey & Companylọ ọrụ
Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị itinye usoro ọrụ ndị ahịa n'ime usoro mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ ma na-edozi nsogbu ndị ahịa na ngwa ngwa o kwere mee. Ikwe ka nsogbu dọrọ ga-ebibi ikike gị na ntụkwasị obi nke achọrọ iji mee atụmanya n'ime ndị ahịa na ndị ahịa gaa Fans.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa infographicinfographicMcKinseyMcKinsey & Companylọ ọrụelekọta mmadụọrụ ndị ahịaakụnụba